Warka - Ma fiicantahay in la isticmaalo cidhifyada birta ee tidcan tuubada PTFE
Ma fiican tahay in la isticmaalo cidhifyada birta ee tidcan tuubada PTFE
Dadku waxay waydiin karaan inay ok tahay in lagu xidho tuubada shidaalka PTFE ee birta tidcan ilaa dhamaadka barbadaha oo leh tuubbada xajinta caadiga ah ee nidaamka shidaalka karbohaydrayt ee cadaadiska hooseeya.
Dadku waxa laga yaabaa inay rabaan inay beddelaan dhammaan tuubooyinka shidaalka tidcan ee leh kuwa PTFE, oo ay leeyihiin meel ku xidhid xidhidhyo ah, oo ay ku warwareegaan inay shaqayn doonto iyo in kale?
PTFE waa doorasho weyn oo loogu talagalay nidaamyada shidaalka laakiin waa inaad isticmaashaa qalab dib loo isticmaali karo ama la curyaamiyey. Waxaad ka hubin kartaa faallooyinkan hoose ee labadan nooc ee xidhidhisku dhammeeyo:
1. PTFE dhamaadka tuubada wareegta dib loo isticmaali karo waa sahlan tahay in la rakibo iyo isticmaale saaxiibtinimo, kaas oo isticmaala nidaam laba qaybood ah si uu u ilaaliyo tuubada meesha. Naqshad gaar ah oo ciriiri ah, dib ayaa loo isticmaali karaa iyada oo aan waxyeello u geysan wadajirka, iyo hagaha wadajirka ah ee dunta ayaa ka hortagi kara dhaawaca tuubada gudaha. The Xidhiidhiyaha tuubada PTFEwaxaa si farsamaysan loogu dhejiyaa xudunta tuubada PTFE si loo bixiyo shaabadda ugu weyn ee suurtogalka ah, iyo saxanka dibadda ee birta ah ayaa si gooni ah loo xiray si loo gaaro awoodda ugu weyn ee suurtagalka ah ee tuubada. Waxoogaa way ka culus yihiin, laakiin waxay sheeganayaan inay leeyihiin hab tuubada isku xidha oo ka badbaadsan qufulyada riixida.
2. Qalabka tuubooyinka crimped waxaa badanaa lagu isticmaalaa xarumaha. Waxay dhisaan tuubooyin badan sababtoo ah waxay u baahan tahay saxaafadda haydarooliga ah iyo caaryo gaar ah si ay si habboon u ciribtiraan qoorta ilaa dhammaadka tuubada. Mashiinadan iyo caaryadani badanaa waa qaali, markaa ma arki doontid shakhsiyaad ama maraakiib yaryar oo isticmaalaya. Tuubbada qallafsan waxay u baahan tahay cufan cusub si dib loo isticmaalo, laakiin waxaa loo tixgeliyaa qalabka ugu xoogga badan uguna kalsoonida badan haddii si sax ah loo curyaamiyo.
Qalabka BesteflonTuubooyinka shidaalka PTFE ee birta ah ee tidcan oo leh xirmooyin dib loo isticmaali karo AN, ama xirmooyinka cufan waxay ku dhammaanayaan cabbirrada caadiga ah ee AN6, AN8, AN10. Wixii su'aalo ah ama su'aalo ah oo ku saabsan arrintan, si xor ah ula xiriir kooxdayada iibka sales02@zx-ptfe.com
tuubada ptfe madow ee warshadaha baabuurta
Biriiga: Tuubooyinka Cunifer ama tuubooyinka SS PTFE? |...
Qalabka ku rakiban/khadadka: Jawaab-celinta looga baahan yahay y...
tuubada dahaarka leh ee ptfe, tuubada ptfe, Meesha dhalaalaysa ee Ptfe Tube, Ptfe Hose oo isku dhafan - 939/939b, ptfe tuubada tidcan, 6an Ptfe Hose Assembly,